ဘုရားသခင်ကြွေအံကစားခဲ့သလား?(သို့မဟုတ်)ကွမ်တမ်ကမ္ဘာသို့ အလည်တစ်ခေါက် | Curiosity Science Magazine
August 24, 2016 · by Thaw Zin Htun	· in Physical Science.	·
အရင် ဆောင်းပါးမှာ တုန်းကျွန်တော်နဲ့တူတူအချိန်-ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာခရီးထွက်ပြီး the Theories of Special and General Relativity(အထူးနှင့်ယေဘုယျနှိုင်းယျသီအိုရီ)ကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ်။ ခုတော့ အက်တမ်အောက်အမှုန်လေးများ ရဲ့ကမ္ဘာကြီးဆီကို ကျွန်တော်နဲ့ တူတူသွားကြရအောင်လား? ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောလိုတာကတော့ Quantum ဟာ ရီလေတီဗတီထက်အများကြီးပိုရှုပ်သယောင်ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Quantum Level မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ တခြားစီကိုဖြစ်နေပါတယ်။ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေထဲမှာ Quantum Mechanics ဟာ မသိသာလှပေမဲ့ အက်တမ်တစ်လုံးရဲ့ကမ္ဘာထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Quantum သာလျှင်အုပ်စိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မခံစားရပေမဲ့ သူတို့ဟာအမြဲရှိနေပါတယ်။ တိကျခိုင်မာတဲ့သင်္ချာညီမျှခြင်းတွေ၊ သီအိုရီ နောက်ခံတွေသာမရှိဘူးဆိုရင် Quantum ဟာ ရူးကြောင်ကြောင် လူတစ်ယောက်က လာပြောနေသလားလို့တောင်မှတ်ရပါတယ်။ ကဲ …. ရှုပ်ထွေးပြီး လှပလွန်းတဲ့ Quantum ကမ္ဘာကို ကျွန်တော်တို့သွားလည်ရအောင်လား?
၁၉ ရာစုနှစ်အစမှာ သိပ္ပံပညာ ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ သီအိုရီတွေ အထူးသဖြင့် Newton ရဲ့ သီအိုရီတွေဟာအထူးတလည်ကိုအောင်ပွဲခံနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအောင်ပွဲခံတဲ့ရလဒ်တွေကြောင့်လည်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ Determinism လို့ခေါ်တဲ့ အရာတစ်ခုခုကို တိတိကျကျခန့်မှန်းလို့ရမယ်ဆိုပြီး ယူဆတဲ့အယူဟာ အင်မတန်ကိုပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် ရူပဗေဒ ဟာ ပြီးပြည့်စုံနေပြီ၊ ထပ်ပြီး အနည်းငယ်မွမ်းမံပြင်ဆင်စရာအနည်းငယ်သာရှိတော့မယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ Laplace တို့လိုနာမည်ကြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အဓိက စိတ်ကူးကတော့ အရာရာအားလုံးကို တိကျသေချာစွာ ခန့်မှန်းနိုင်မဲ့သိပ္ပံဥပဒေသတွေကိုရှာဖွေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာ အရာတစ်ခုရဲ့ အချိန်အခါ တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသိလိုက်ပီဆိုပါတော့။ အဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာထိုအရာရဲ့နောက် အချိန်တစ်ခုမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေကိုရောက်နေမလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းလို့ရမဲ့ဥပဒေသတွေကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟာနေမင်းကြီးရဲ့ယခုလက်ရှိတည်နေရာနဲ့အလျှင်ကိုသိမယ်ဆိုရင်နောင်တစ်ချိန်မှာနေမင်းကြီးဟာဘယ်နားမှာဘယ်လိုရှိနေမလဲဆိုတာ ကို Newton ရဲ့နိယာမတွေကိုသုံးပြီးတွက်လို့ရတာပေါ့။ ဒီလိုကိစ္စမှာတော့တွက်လို့ရတာဟုတ်ပါပြီ။ ဘောလုံးတစ်လုံးကိုပစ်လိုက်ရင်သူဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာလဲတွက်လို့ရပါတယ်။ထို့အတူပဲ ရေကန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကလှိုင်းလေးတွေဘယ်လိုဖြတ်သွားလဲ ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရပြန်တယ်။ အဲ့ဒီဟာတွေကို ညီမျှခြင်းတွေအများကြီးနဲ့ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။ အဲ့တာကို ရှေးရိုးစွဲမက္ကင်းနစ် (Classical Mechanics) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Laplace က အဲ့လောက်နဲ့မကျေနပ်နိုင်သေးဘူး။ သူကအဲ့လိုမျိုး ဘယ်အရာကိုမဆိုတွက်လို့ရတဲ့ဥပဒေသတွေကိုလိုချင်ပါတယ်တဲ့။သူဟာ အက်တမ်အောက်အမှုန်တွေရဲ့ သဘောတရားတွေကို မသိခဲ့သေးလို့ပါ။ အဲ့ဒီ အက်တမ်အောက်အမှုတွေရဲ့သွားလာတာကိုလေ့လာတဲ့ပညာ Quantum Theory ဟာ Laplace ရဲ့ Determinism ဆိုတဲ့အိပ်မက်ကိုရိုက်ချိုးဖို့ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီDeterminismကိုချိုးဖောက်ဖို့စတင်အကြောင်းဖန်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဗြိတိန်လူမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်နှစ် ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lord Rayleigh နဲ့ Sir James Jean တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ တွက်ချက်ခန့်မှုန်းမှုတွေအရ အပူလွှတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဥပမာကြယ်တို့အဆုံးစွန်ပြောရရင်အပူပေးလို့ရဲနေတဲ့သံပြားတို့ကအစradiationလို့ခေါ်တဲ့အပူဖြာထွက်မှုဖြစ်ပေါ်ရပါမယ်။အဲ့လိုအပူဖြာထွက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စွမ်းအင်ကို ရေဒီယိုလှိုင်းများ၊ X-ray များ၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ အလင်းဖြူတန်း အစရှိသရွေ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း (Electromagnetic Waves) တွေအနေနဲ့ နှုန်းတစ်ခုထဲနဲ့ထုတ်လွှတ်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဟာအရေပြားကင်ဆာနဲ့သေရုံတင်မကစကြာဝဠာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ အရာတွေအကုန်လုံးဟာလည်း အပူချိန်တစ်ခုထဲအနေနဲ့ရှိနေရပါလိမ့်မယ်။ (ပြသနာကိုအောက်မှာရှင်းပြထားပါတယ်) ဒီပြသနာကိုရှင်းဖို့ အတွက် အဖြေကို ဂျာမန်လူမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်လဲဖြစ်၊ Quantum ရဲ့ဖခင်လို့လဲပြောလို့ရတဲ့ Max Planck ဟာ မီးလုံးလေးတစ်လုံးရဲ့စွမ်းအင်ကိုမြှင့်ဖို့ကြိုးစားရာကနေစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့အဆိုအရဆိုရင် စွမ်းအင်ဟာ သယ်ချင်သလိုအသယ်ခံခွင့်မရှိပဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့စွမ်းအင်ထုပ်လေးတွေနဲ့သာသယ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကဲ .. သူရဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လေးတွေကိုအကျယ်ဖြန့်ကြည့်ရအောင်။
ပုံ-၁ Electromagnetic Spectrum ပြပုံ
၁၈၉ဝ အစောပိုင်းကာလများမှာ Max Planck ဟာ မီးလုံး တစ်လုံးဟာ အလင်းပမာဏ အများဆုံးထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး အနဲဆုံးလျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးဖို့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ ပထမဆုံးသူလုပ်ရတာဟာ မီးလုံးထဲကနန်းကြိုးမျှင်လေးကနေပြီးအလင်းပမာဏဘယ်လောက်အထိထုတ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကိုစတင်ပြီးစဉ်းစားရပါတော့တယ်။ အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲအလင်းမှာ မတူညီတဲ့ရောင်စဉ်တွေနဲ့ရောင်စဉ်တစ်ခုစီကို ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုပါတယ်။ ဟုတ်ပြီ ပြသနာကဘာလဲဆိုတော့ အများဆုံး အလင်းပမာဏလိုချင်တာ အလင်းဖြူကိုပဲလိုတာလေ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထဲကျသွားလို့လည်းမဖြစ်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်ထွက်လာလို့လည်းမဖြစ် ။သူဟာအပူထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကနေပြီးအလင်းလှိုင်းကိုထုတ်တဲ့အခါရောင်စဉ်တန်းတစ်ခုကိုစွမ်းအင်တွေဘယ်လိုခွဲထွက်ရမလဲ တွက်တဲ့အခါမှာ ခုနကပြသနာ ပြန်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ ထွက်ရမဲ့ပမာဏ က အနန္တဖြစ်နေပြန်ပြီ။ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါဖြစ်နိုင်တာမှမဟုတ်တာ။ အဲ့အခါမှာသူဟာ ရှေးရိုးစွဲ ရှိပြီးသား သီအိုရီ ကြီးကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ပြီး သူရဲ့ အယူအဆသစ်တစ်ရပ်ကို စတင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ရူပဗေဒရဲ့ ဥပဒေသ အသစ်တစ်ခုပေါ့။ သူ့အဆိုအရ အလင်းလှိုင်းတွေဟာ စွမ်းအင်တွေကို စွမ်းအင်အထုပ်ကလေးတွေနဲ့သယ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်တဲ့အလင်းတန်းတွေ(ဥပမာ ခရမ်းရောင်ခြည်တန်း) တွေဟာ စွမ်းအင်အထုပ်ကြီးကြီးတွေနဲ့သယ်ဆောင်ပြီး ကြိမ်နှုန်းနိမ့်တဲ့အလင်းတန်းတွေ(ဥပမာအနီရောင်အလင်းတန်း)တွေကတော့စွမ်းအင်ထုတ်အသေးလေးတွေနဲ့သယ်ဆောင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နဂိုသီအိုရီမှာခန့်မှန်းခဲ့သလိုမျိုး ကြိမ်နှုန်းမတူတဲ့အလင်းတန်းတွေဟာ အဲ့ဒီစွမ်းအင်ထုပ်လေးတွေကိုQuantaလို့ခေါ်ပါတယ်။(ပုံ၂တွင်ရှု)အလင်းရဲ့စွမ်းအင်ကိုအဲ့လိုအထုပ်ထုပ်လေးတွေနဲ့သယ်ဆောင်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုအူကြောင်ကြောင်နိုင်လှတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Einstein ဟာ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရင်းနှီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြသခဲ့ပါတယ်။ Sharing လို့ခေါ်တဲ့မျှဝေယူဆောင်ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ … ဆက်ကြည့်ရအောင်လား?
ပုံ-၂ စွမ်းအင်ထုပ်လေးများ (quanta) ပြပုံ
Einsteinရဲ့ဥပမာလေးကတော့ရှင်းပါတယ်။ကဲ..ခင်ဗျားမှာဘီစကွတ်မုန့်လေးတစ်ခုရှိတယ်လို့သဘောထားလိုက်။ အဲ့ဘီစကွတ်မုန့်လေးကို ကလေးတစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်။ အဲ့ကလေးလေးကပျော်သွားမှာပဲ ။ကဲ အဲ့ဘီစကွတ်လေးကို နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီး ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပေးကြည့်လိုက်။ ကလေးတစ်ယောက်စီက ဘီစကွတ်တစ်ပိုင်းစီ သာရတော့ပြီး သူတို့ရဲ့အပျော်ကလည်း ထက်ဝက်ကျသွားမှာပဲ။ အဲ့ဒီလိုပဲ။ သုံးယောက်ဆို ဘီစကွတ်ကလည်း သုံးပိုင်းဖြစ်ပြီး ကလေးတွေရဲ့အပျော်ကလဲသုံးပုံတစ်ပုံပဲရှိတော့မှာပဲ။ ကဲ .. တကယ်လို့သာ အခန်းတစ်ခုထဲမှာ ကလေးပမာဏဟာ အနန္တ (Infinity) ရှိတယ်ဆိုပါတော့။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ရမဲ့ ဘီစကွတ်ပမာဏဟာ တစ်ကိုတည်ပြီး အနန္တကိန်းနဲ့စားထားတဲ့ အလွန့်အလွန်အလွန် သေးငယ်တဲ့ပမာဏလေးပဲ ရတော့မှာဖြစ်ပြီးဘီစကွတ်လည်း မကျန်ကလေးတစ်ယောာက်ကမှလည်း ပျော်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ခုနကပြသနာကလည်း အဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲ။ ဘီစကွတ်နေရာမှာ စွမ်းအင်လို့မြင်ကြည့်လိုက်ရင် …. အပူထုတ်လွှတ်တဲ့ပစ္စည်းကပေးတဲ့စွမ်းအင်လည်း အကုန်ကုန်သွားမယ်။ အလင်းနဲ့ခုနက ကလေးကိစ္စမှာဘာကွာလဲဆိုရင် ကလေးအနန္တပမာဏ ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အလင်းကျတော့ လှိုင်းအလျားမျိုးစုံနဲ့လာတဲ့အတွက် နေရာတစ်ခုမှာ အနနမဟုတ်တောင် အလွန်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ လှိုင်းအရေအတွက်ပမာဏ ရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့အဲ့လှိုင်းတိုင်းတစ်ခုချင်းစီဟာ စွမ်းအင်တွေ(ကလေးဥပမာမှာဆို ဘီစကွတ်တွေ) တူတူခွဲဝေယူတယ်ပဲထား။ အဲ့လိုသာဆို နဂိုအပူလွှတ်ပစ္စည်းရဲ့အပူချိန်ဆိုတာလုံးဝပျောက်သွားတော့မှာပေါ့။ နေတွေကြယ်တွေအကုန် အေးခဲကုန်မှာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် အကုန်အပူချိန်တူတူရှိနေရမှာပေါ့။ နေနဲ့ခင်ဗျားအခန်းထဲက ဖန်မီးသီးနဲ့အပူချိန်တူနေမှာပေါ့။
ကံကောင်းထောက်မ စွာပဲ သဘာဝတရားကြီးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဟာ အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ရပါဘူး။ Planck ခန့်မှန်းခဲ့သလိုပဲ ကြိမ်နှုန်းမြင့်ပြီး လှိုင်းတွေ စွမ်းအင်ထုပ်ကြီးကြီးယူပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ဂျီကျပြီးလောဘကြီးတတ်တဲ့ကလေးတွေလိုပေါ့။ သူက သူများတွေနဲ့တူတူ ဘီစကွတ်ခွဲမယူဘူး ပိုလိုချင်တယ်ပေါ့။ ပိုတိတိကျကျပြောရရင် ဘီစကွတ် တစ်ဝက်တိတိရမှ ယူမယ်ဆိုတဲ့ကလေးမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူလိုချင်တဲ့ပမာဏ မပေးနိုင်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့က မယူကြတော့ဘူး။ စိတ်ကောက်ပြီးထွက်သွားကြတယ်ပေါ့။ တကယ်လို့သူတို့လိုချင်တဲ့ ပမာဏ ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုယူကြမှာပေါ့။ နေလိုအပူချိန်မြင့်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးက သူတို့လိုချင်တဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏကိုပေးနိုင်လို့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မျိုးထုတ်ပေးနိုင်ပေမဲ့အခန်းမီးသီးလောက်ကဘယ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါ့မလဲ။ဒါကြောင့်အခန်းကမီးသီး၊ဒါမှမဟုတ်ကော်ဖီခွက်ကအပူလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုမခံစားရတာပေါ့။ တစ်ဖက်ကကြည့်လည်း ပေးနိုင်သလောက်စွမ်းအင် ကိုပဲယူကြတော့ အေးခဲသွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့။ လောဘကြီးတဲ့စွမ်းအင်ထုပ်ကြီးကြီးနဲ့သယ်တဲ့ ကြိမ်နှုန်းမြှင့်လှိုင်းတွေထွက်သွားတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်လှိုင်းတွေကနေပြီးတော့ စွမ်းအင်ကိုသယ်ဆောင်သွားကြတာပေါ့။ သူတို့သယ်ဆောင်သွားတဲ့ ပျမ်းမျှစွမ်းအင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြိး အပူချိန် (temperature) အဖြစ်ခံစားရတာပေါ့။ Planck ရ နိယာမအရ အပူချိန်ပိုမြင့်လေ ပျမ်းမျှစွမ်းအင်ပိုမြင့်လေပေါ့။ ဒါကြောင့် မီးတောက်တစ်ခုဟာ အပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်ပြောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့်အပြာရောင်မီးတောက်ဟာ အနီရောင်မီးတောက်ထက်ပိုပူတာပေါ့။ အပြာရောင်လှိုင်း က ကြိမ်နှုန်းပိုမြင့်တော့ စွမ်းအင်ထုပ်ပိုကြီးကြီး နဲ့သယ်မှ ရတယ်လေ။ အဲ့တော့ပျမ်းမျှစွမ်းအင် (အပူချိန်) လည်း ပိုများတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလောက်ဆို စွမ်းအင်ထုပ်လေး (Quanta) တွေအကြောင်းကို သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတစ်ကယ်ကလူတွေဟာ သိသာမသိခဲ့တာပါ။ ဟိုးအရင် ကျောက်ခေတ်လူသားတွေခေတ်ကထဲကနေပြီးမီးတောက်တွေရဲ့တစ်ထပ်နဲ့တစ်ထပ်အရောင်မတူတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲမြင်နေခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလား? ဒီ ကွမ်တမ် အနုမာန (Quantum Hypothesis) ဟာ အပူလွှတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကိုကောင်းမွန်စွာရှင်းပြနိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့Determinismအပေါ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်ဟာ 1926မှာနောက်ထပ်ဂျာမန်လူမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ Werner Heisenberg ရဲ့ “The Uncertainty Principle” လို့ခေါ်တဲ့ မရေရာခြင်းနိယာမ ကိုစတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့အခါမှပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခဲ့ရပါတယ်။
မရေရာခြင်းနိယာမ (The Uncertainty Principle)
ရုတ်တရက်နာမည်ကြားလိုက်ရင် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကြောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ မသေချာမှတော့ဘာလို့ နိယာမလုပ်နေသေးလဲပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ ၊ မသေချာတဲ့အကြောင်းကိုပဲနိယာမလုပ်ထားတာပါ။ မရေရာခြင်းနိယာမရဲ့အခြေခံသဘောတရားကတော့ရှင်းပါတယ်။ ကဲ အက်တမ်အောက်အမှုန်လေးတစ်ခု၊ အီလက်ထရွန် လေးတစ်လုံးလို့ပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ အဲ့ဒီ အီလက်ထရွန် လေးဟာ အက်တမ်ရဲ့ Nucleus ကိုလည်ပတ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ဒီ အီလက်ထရွန်လေးရဲ့တည်နေရာ(Position) နဲ့သူ့ရဲ့သွားနေတဲ့အလျှင် (Velocity) တို့ကိုတစ်ချိန်ထဲမှာတူတူမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ကမ္ဘာဟာနေကိုလည်ပတ်တဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ရဲ့တည်နေရာနဲ့အလျှင်ကိုတစ်ချိန်ထဲမှာနှစ်ခုတူတူသိရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့အီလက်ထရွန်မှာတော့အဲ့ဒီလိုမသိရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့။ အဲ့တာဘာကြောင့်ပါလိမ့် ။ ဆက်ကြည့်ရအောင်။
အီလက်ထရွန်လေးတစ်ခုရဲ့တည်နေရာ(Position)ကိုသိရှိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအီလက်ထရွန် လေးရှိတဲ့နေရာကိုအလင်းတန်းလေးတစ်ခုလွှတ်လိုက်ရပါတယ်။လှိုင်းအလျားတိုတဲ့အလင်းတန်းနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာ အီလက်ထရွန်ရဲ့ တည်နေရာကိုပိုတိတိကျကျသိရှိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ခုနက Planck ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း လှိုင်းအလျားတိုတဲ့ အလင်းတန်းဟာစွမ်းအင်ပမာဏ ပိုကြီးကြီးသယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ စွမ်းအင်ပမာဏ ဟာ အီလက်ထရွန်ရဲ့အလျှင်ကိုတိုင်းတာလို့မရအောင်နှောင့်ယှက်ပါတော့တယ်။ ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာ အီလက်ထရွန်လေးရဲ့တည်နေရာ ရဲ့သေချာရောရာမှုဟာ ပိုမြင့်ပြီး အလျှင်ရဲ့သေချာရေရာမှုကတော့ကျသွားပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရရင် အလျှင်ရဲ့မရောရာမှု (Uncertainty in Velocity) ဟာမြင့်ပြီးတည်နေရာရဲ့မရေရာမှု(Uncertainty in Position) ဟာ လျော့ကျသွားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာအီလက်ထရွန်လေးရဲ့အလျှင်ကိုပဲသိချင်တယ်ဆိုပါတော့။ဒီအခါမှာလည်း အလင်းတန်းလေး တစ်ခုလွှတ်ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ လှိုင်းအလျားရှည်ပြီးစွမ်းအင်နည်းတဲ့အလင်းတန်းကိုထိုးကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီအခါမှာလှိုင်းအလျားတိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တာတည်နေရာ(Position) ကိုတိတိကျကျမသိနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအလျှင်(velocity) ကိုတော့ ပိုပြီးတိတိကျကျသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အလျှင်ရဲ့မရောရာမှု (Uncertainty in Velocity) ဟာလျော့ကျသွားပြီး ဟာမြင့်ပြီးတည်နေရာရဲ့မရေရာမှု(Uncertainty in Position)ဟာမြင့်တက်လာပါတော့တယ်။
Classical Mechanics (ရှေးရိုးစွဲမက္ကင်းနစ်ပညာရပ်) တွက်ချက်တဲ့အခါ မှာ Newton နိယာမဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလိုQuantumMechanicsမှာလည်း Heisenbergတွက်ထုတ်ခဲ့တဲ့မရေရာမှုနိယာမဟာလည်းအက်တမ်အောက်အမှုန်တွေအတွက်လုံးဝကိုကင်းလွတ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့နိယာမတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိယာမ ဟာ Laplace ရဲ့ Determinism ကို ရိုက်ချိုးခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့တိုင်းတိုင်း ဘယ်အမှုန်ကိုတိုင်းတိုင်း ဒီနိယာမ အောက်ကလွတ်ကင်းခြင်းမရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအချိန်မှာတောင်မှအမှုန်တစ်ခုရဲ့အလျှင်နဲ့တည်နေရာကိုတိတိကျကျမသိနိုင်ဘူးဆိုရင် အနာဂတ်အတွက်ခန့်မှန်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလောက်ကို ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒီနိယာမကို Single Slit Experiment လို့ခေါ်တဲ့အပေါက်တစ်ခုဟ စမ်းသပ်ချက်နဲ့ စမ်းသပ်ပြီး ညီမျှခြင်းတွက်ထုတ်လို့ရပါတယ် (Derivation ကိုတော့ထည့်မပေးတော့ပါ။ ) သူ့ရဲ့ညီမျှခြင်းကတော့ [ တည်နေရာရဲ့မရေရာမှု X အလျှင်ရဲ့မရောရာမှု X အမှုန်ရဲ့ဒြပ်ထု ပလန့်ကိန်းသေ / (4 X pi) ] ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ-၃ မှာ အကျယ်ပြထားပါတယ်။
ပုံ-၃ : မရေရာခြင်း နိယာမ ၏ ညီမျှခြင်းပြပုံ
နောက်တစ်ချက် Determinism ကိုထပ်ပြီး ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တဲ့ အရာကတော့ အီလက်ထရွန်တွေရဲ့ Wave-particle duality လို့ခေါ်တဲ့လှိုင်း-အမှုန်ဒွန်တွဲခြင်းသဘောတရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်တာပါပဲ။ ဒီသဘောတရားဟာမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်တော့ခက်ပါတယ်။ အမှုန်ကိုဥပမာ ပေးရမယ်ဆိုရင် ကမ်းခြေကကျောက်တုန်းလေးတစ်တုန်းကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဟုတ်ပြီ သူကတော့အမှုန်ပေါ့။ လှိုင်းကြတော့ ပင်လယ်ရေလှိုင်းတွေကိုမြင်ကြည့်လိုက်။ သူတို့ရဲ့ ရွေ့လျားပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်။ ဟုတ်ပြီ ၊ အဲ့တာတွေကလှိုင်း။ ရေလှိုင်း သည် လှိုင်းဥပမာ။ ကျောက်တုန်းသည် အမှုန်ဥပမာ။ သူ့ဘာသာနဲ့သူသက်သက်ဆီပဲ။ ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကများလာပြီး ကျောက်တုန်းဟာ လှိုင်းလိုဖြစ်နေတယ်လို့ခင်ဗျားကိုလာပြောမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးခင်ဗျားလုပ်မိမှာက ဖုန်းကိုထုတ်ပြီး ရွာသာကြီးကို ခေါ်မိမှာပါ။ Classical Mechanics အရဆိုလည်း အမှုန်တွေဖြစ်တဲ့ အီလက်ထရွန်တွေဟာ လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်သဘောတရားရွေ့ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ အပေါက်နှစ်ခုဟ စမ်းသပ်ချက် (Double-slit experiment) အရတော့ ဖြစ်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီမှာကျွန်တော် ဥပမာလေးပေးချင်ပါတယ်။ အပေါက်နှစ်ပေါက်ဟ စမ်းသပ်ချက်ကို အီလက်ထရွန်နဲ့မဟုတ်ဘဲ ဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တာပေါ့။ (Classical Mechanics သဘောတရားကိုမြင်သာအောင်ပါ ) အောက်ကပုံ-၄ ကိုကြည့်ပါ ။
ပုံ-၄ နှစ်ပေါက်ဟစမ်းသပ်ချက်ကို ဘောလုံးဖြင့်သရုပ်ပြပုံ
ပြထားတဲ့စမ်းသပ်ချက်အတိုင်းကို ဘောလုံးလေးတွေတဲ့တဲ့ ပစ်လွှတ်လိုက်ရင်ဘောလုံးတွေဟာ အပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုကျော်ပြီးနောက်က ကားချပ်ကိုသွားထိလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အလည်ကအတားအဆီးနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ကိုမရောက်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘယ်ဘက်ကပေါက်ကဝင်တဲ့ဘောလုံးကဘယ်ဘက်နောက်ကိုသွားထိလ်ိမ့်မယ်။ညာဘက်ပေါက်ကဝင်တဲ့ဘောလုံးကညာဘက်ကိုသွားထိလိမ့် မယ်။ အပေါက်နှစ်ပေါက်ဟစမ်းသပ်ချက်ကအဲ့သဘောပါပဲ။ ဘောလုံးလေးတွေအစား အီလက်ထရွန်တွေကိုသုံးကြတယ်။ Classical Mechanics အရဆိုရင် ရလဒ်တူတူပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ပါ။အီလက်ထရွန်တွေကိုပစ်လွှတ်တဲ့အခါမှာတော့အင်မတန်အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဘောလုံးလိုမျိုးနှစ်နေရာထဲကျရမဲ့အစား Electron တွေဟာ နောက်ခံကားချပ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်ကျဲကားပြီးတော့ကျပါတယ်။ (ပုံ-၅ တွင်ရှုပါ ။) အဲ့တာတွေဟာဘာတွေဖြစ်မလဲ? ဘာလို့ရှေးရိုးစွဲမက္ကင်းနစ် အတိုင်းမလိုက်နာတော့တာလဲ။ အဲ့ဒီခေတ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ တစ်ခုကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ လှိုင်းတွေသာလျှင် ထိုသို့သဘောဆောင် နိုင်တယ်ဆိုပီးတော့ပါ။ (ပုံ-၆ တွင်ရှု) လှိုင်းတွေဟာခွဲလို့ရတယ်။ ပြန်ပေါင်းလို့ရတယ်။ အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ကောင်တွေပေါ့။ အီလက်ထရွန်တွေဟာ အပေါက်နှစ်ပေါက်ထဲကို ရေလှိုင်းတစ်ခုထဲ့လိုက်ရင်ဖြစ်မဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။
ပုံ-၅ အပေါက်နှစ်ပေါက်ဟ စမ်းသပ်ချက်ကို အီလက်ထရွန်များဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်း
ပုံ-၆ လှိုင်းများ၏ Inteference ပုံစံ ။ လှိုင်းနှစ်သည် in-phase ဖြစ်ပါ က (လှိုင်းတစ်ခု၏ ထိပ်ခုံးသည်နောက်ထိပ်ခုံးနှင့်တိုက်ဆိုင်ပါက) လှိုင်းနှစ်ခုပေါင်းပီး out-of-phase ဖြစ်ပါက (လှိုင်းတစ်ခု၏ထိပ်ခုံးသည်အခြားလှိုင်း၏လှိုင်းခွက်နှင့်တိုက်ဆိုင်သွားပါက)လှိုင်းနှစ်ခုသည်အချင်းချင်းပြယ်သွားမည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ Interference Pattern ခေါ် Screen ပေါ်မှာ လိုင်းကြောင်းများဖြစ်သည်။
အမှုန်တစ်ခုလေးဖြစ်တဲ့အီလက်ထရွန်ဟာလှိုင်းသွားသလိုဘာလို့သွားနေရတာလဲ။အမှုန်တစ်ခုဟာအမှုန် တစ်ခုပဲ။ လှိုင်းတစ်ခုဟာလှိုင်းတစ်ခုပဲ ။ခုနကလိုမျိုး ကျောက်ခဲတစ်တုံးဟာ အမှုန်၊ ပင်လယ်ရေလှိုင်း ဟာ လှိုင်း။ ဒါပေမဲ့ကျောက်ခဲကရေလှိုင်းလိုဖြစ်နေတယ်?ဘာလဲဟ?၁၉၂ဝခုနှစ်မှာဒီစမ်းသပ်ချက်စတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသိပ္ပံ ပညာရှင်တွေဟာအီလက်ထရွန်တွေရဲ့လှိုင်းသဘာဝကိုတိတိကျကျသိရဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ချို့ကတော့အီ လက်ထရွန်အမှုန်လေးဟာသွားနေတဲ့အချိန်မှာ (အရွေ့ရှိနေတဲ့အချိန် – in motion) မှာလှိုင်းတွေအဖြစ်နဲ့ပြန့်နှံ့ သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Erwin Schrödinger ဆိုတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ (သူလဲQuantumမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ၊ Schrödinger’s Cat ဆိုတဲ့ thought experiment လေးကိုကြာဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။) အီလက်ထရွန်ဟာလှိုင်းတွေအဖြစ်ပြန့်နှံ့သွားဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကို ညီမျှခြင်းပါထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အဆိုအရဆိုရင် အီလက်ထရွန်တွေဟာ လွှတ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ အမှုန်လေးအနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲ ရေလှိုင်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကြားထဲမှာအမျိုးမျိုးသောတခြားအနုမာန (Hypothesis) နောက်ဆုံးမှာတော့ Max Born လို့ခေါ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင် ကနေပြီးတော့ကျေနပ်အား၇လောက်ဖွယ်အဖြေထုတ် ခဲ့ပေးပါတယ်။ Born ရဲ့အဆိုအရလှိုင်းတွေဟာအီလက်ထရွန်လေးက လှိုင်းပုံစံပြန့်နှံသွားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ တခြားလူတွေခန့်မှန်းခဲ့သလိုအရင်ရူပဗေဒမှာရှိပြီးသားသဘောတရားတွေနဲ့လဲမတူပါဘူးတဲ့။ သူတင်ပြခဲ့တာ က အရမ်းကိုဆန်းကြယ်ပြီး အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ အဲ့ဒီလှိုင်းတွေဟာဖြစ်တန်စွမ်း လှိုင်း (Probability Wave) တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နေရာတစ်နေရာမှာရှိနေတဲ့လှိုင်းရဲ့အရွယ်အစားဟာထိုနေရာမှာအီလက်ထရွန်ရှိနိုင်တဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းကိုပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အံစာတုံးတစ်တုံးမှာ နံပါတ် ၆ ကျဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ က ခြောက်ပုံတစ်ပုံပါ။ အဲ့ဒီလိုပဲ နေရာလေးတစ်နေရာ မှာ အီလက်ထရွန်တစ်လုံးရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခုနက ပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းလှိုင်း (probability wave) တွေနဲ့ကြည့်ုလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့လှိုင်းအရွယ်အစားအကြီးဆုံးရှိတဲ့နေရာဟာ အီလက်ထရွန်တွေရဲ့ အများဆုံးစုစည်းနေတဲ့နေရာမဟုတ်ရဘဲ အီလက်ထရွန်ရှိဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်တွေးကြည့်ရင်အင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ အီလက်ထရွန်တွေကိုယ်တိုင်ဟာ ဖြစ်တန်စွမ်းတွေနဲ့နေရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သိပ္ပံပညာမှာ ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ဆိုပါတော့။ ဟင်းလင်းပြင်(space) နေရာလေးတစ်နေရာမှာ။ ထားပါတော့ Atomတစ်လုံးရဲ့ပတ်လည်မှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အီလက်ထရွန်ဟာယခုလက်ရှိအချိန်(time)တစ်ခုမှာ သူဟာ ဘယ်နေရာမှာရှိမယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတိတိကျကျမေးခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေမရှိတော့ပါဘူး။ကျွန် တော်တို့မေးရမဲ့မေးခွန်းက ဘယ်အနေရာမှာ အဲ့ဒီ အီလက်ထရွန်ဟာ ရှိဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ တော်တော်ကိုအူကြောင်ကြောင်နိုင်တာပဲ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ အဲ့လိုအူကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ကြားကပဲ ဒီ အီလက်ထရွန်တွေဟာ ဖြစ်တန်စွမ်းတွေနဲ့ပဲတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဖြေရှင်းချက်ရဲ့မှန်ကန်ချက်က ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ရှိနေပါတယ်။ ဆိုပါတော့ ကျွန်တော်က အီလက်ထရွန်လေးတစ်လုံးကို ပစ်လိုက်မယ်။ ပစ်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်တော်ဟာသူဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာမသိနိုင်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာ Schrödingerရဲ့ညီမျှခြင်းကိုသုံးပြီးအီလက်ထရွန်ရဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းလှိုင်းကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်နားမှာရှိနိုင်ခြေဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုပြီးခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ ခုနကလို နှစ်ပေါက်ဟစမ်းသပ်ချက်မှာလို အီလက်ထရွန်တွေအများကြီးပစ်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ သူရဲ့နောက်ခံ Screen ပေါ်က Interference Pattern ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်နေရာမှာဆို ဘယ်လောက်ပမာဏ ကျရောက်မလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ (ပုံ-၇) ဒီလိုခန့်မှန်းချက်မျိုးကိုအကြိမ်ကြိမ်အခါခါစမ်းသပ်ချက်တွေပြုလုပ်ပြီးအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တော်တာ် များများဟာလဲလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုလုံးဝသဘောမကျခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်တော့ရှိပါတယ်။ Space-time ကိုသေချာစွာဖော်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ Albert Einstein ပါပဲ။သူ့ရဲ့ Space-time ထဲမှာ အရာရာတွေဟာ တိတိကျကျမရှိဘဲအခုလိုဖြစ်တန်စွမ်း(probablity)တွေနဲ့ ရှိနေတာကိုသူဟာသဘောမကျခဲ့ပါဘူး။ လောင်းကစားသာသာသဘောမျိုးနဲ့ ရှိနေတာဟာ သူအတွက်တော့လုံးဝကိုလက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
ပုံ – ၇ : နောက်ခံ Screen ပေါ်က Interference Pattern ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်နေရာမှာဆို အီလက်ထရွန်ဘယ်လောက်ပမာဏ ကျရောက်မလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းလို့ရ
Albert Einstein ဟာတော်ရုံတန်ရုံ Idea အသစ်တွေကိုငြင်းပယ်လေ့ရှိတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သူဟာ Quantum ကနေဖော်ပြတဲ့ အရာရာတိုင်းကို ဖြစ်တန်စွမ်းတွေနဲ့အုပ်စိုးနေတယ်ဆိုတာကိုတော့လုံးဝ ကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ သူ ဟာ “I, at any rate, am convinced that He(God) does not throw dice” (ကျွန်တော်ကတော့ ဘုရားသခင်ဟာကြွေအံပစ်မကစားဘူးလို့ပဲခံယူပါတယ်) လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Ironic ဖြစ်တာတစ်ခုက Einstein ဟာ Nobel ဆုကို Quantum နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Photoelectric effect ကိုရှင်းပြနိုင်လို့ရခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့သူဟာ Newton ကနေပြီး Absolute Space မရှိတာကိုလက်မခံခဲ့ချင်သလိုမျိုးပဲ Quantum ကဖော်ပြတဲ့ Randomness ခေါ် အတိအကျမရှိမှု ကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ထိုခေတ်ကတခြားနာမည်ကြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဖြစ်တဲ့ Bohr, Schrödinger, Heisenberg အစရှိတဲ့သူတွေအကုန်ကတော့ Quantum Mechanics ကိုလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ကဲ … ဘုရားသခင်တကယ်ပဲကြွေအံပစ်မပစ်ဆက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။
တစ်ဖက်က Quantum Mechanics ရဲ့အဆိုအရလဲ လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ဖြစ်တန်စွမ်း တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။စကြဝဠာထဲမှာရှိတဲ့အရာရာတိုင်းဟာ Certainty(တိကျသေချာမှု) ရှိတာမဟုတ်ဘဲ Probablity(ဖြစ်တန်စွမ်း)တွေနဲ့စိုးမိုးထားတဲ့ အက်တမ်တွေ၊အက်တမ်အောက်အမှုန်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝတရားဟာတိကျသေချာမှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
Eintein အတွက်ကတော့ ဒါကို လုံးဝလက်ခံလို့မရခဲ့ပါဘူး။ သဘာဝတရားရဲ့အင်မတန်နက်ရှိုင်းတဲ့အဆင့်က အခြေခံကျတဲ့အမှုန်တွေ(electronအစရှိသည်)မှာဖြစ်တန်စွမ်းတွေနဲ့အုပ်စိုးထားတယ်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့တော့လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပဲမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟာဖြစ်မလား ဟိုဟာဖြစ်မလား ဆိုပြီးတိတိကျကျပြောဆိုနိုင်စွမ်းမရှိတာကို Einstein အနေနဲ့သဘောကျကျေနပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီခေတ်ကတခြားသိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများကတော့လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Quantum Mechanics ရဲ့တွက်ချက်မှုတွေနဲ့သူတို့ အက်တမ်တွေ အက်တမ်အောက်အမှုန် အုပ်စုလိုက်တွေရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံတွေကို အင်မတန် သိသာထင်ရှားတိကျစွာသိမြင်နိုင်စေခဲ့လို့ပါပဲ ။ သိပ်မကြာခင်အချိန်တုန်းကပဲ အဲ့ဒီလိုတွက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့တီထွင်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လေဆာရောင်ခြည်တန်း ၊ Transistor တွေ ၊ IC လို့ခေါ်တဲ့ Integrated Circuit တွေ ၊ Electronic လောကကြီးတစ်ခုလုံး ပါပဲ။ Quantum Mechanics ရဲ့ ညီမျှခြင်းတွေကို အခြေခံပြီးတော့ Circuit ပေါ်ကနေပြီး တော့အီလက်ထရွန်လေးတွေရဲ့သွားရာလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးမဲ့ အင်မတန်သေးငယ်တဲ့ခလုတ်လေးတွေကို တီထွင်လို့ရပါတယ်။ Quantum Mechanics သာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီနေ့ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ တို့ ဖုန်းတို့ ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ။ “တကယ်လို့ Quantum Mechanics သာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ယခုထိ ၁၉ ရာစုခေတ်ကပုံစံမျိုးနေနေရမှာပဲ” လုိ့ နိုဘယ်လ်ဆုရသိပ္ပံပညာရှင် Steven Weinberg ကဆိုပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် Quantum Mechanics ဟာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေပြီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သီအိုရီတွေထဲမှာအောင်မြင်မှုအရှိဆုံးလို့တောင်ဆိုကြပါတယ်။
ဒါဆိုမေးစရာရှိပါတယ်။ ဒီလောက်ကြီးအောင်မြင်မှုတွေပြည့်စုံနေတဲ့ Quantum Mechanics ကိုဘာလို့ Einstein က ခေါင်းမာမာငြင်းခဲ့သလဲဆိုတာပေါ့။ ဒီလောက်ကြီးအောင်မြင်နေတဲ့ကြားကနေ ကျွန်တော်တို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ 1920-30 ကြားနေပြီး Einstein မေးခဲ့တဲ့ Quantum Mechanics နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ချို့ကိုဖြေဖို့ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဖြစ်တန်စွမ်း ၊ တိုင်းတာမှုနဲ့ တိုင်းတာပုံ တွေကိုပါဝင်တဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့။ ဆက်ကြည့်ရအောင်။
Niels Bohr ရဲ့အဆိုအရဆိုရင် တိုင်းတာမှု (measurement) ဟာ တိုင်းတာတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာ အီလက်ထရွန်တစ်လုံးကို တိုင်းတာမှုမပြုလုပ်မချင်း အဲ့ဒီ အီလက်ထရွန်ရဲ့တည်နေရာကို မသိရပါဘူး။ တိုင်းတာမှု ပြုလိုက်တဲ့အခါ ကျမှသာ ထို အီလက်ထရွန်ရဲ့တည်နေရာကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (တည်နေရာနဲ့ အဟုန်ကိုလည်း တစ်ပြိုင်နက်ထဲမသိနိုင်ပါဘူး – the Uncertainty Principle) ခုနက နှစ်ပေါက်ဟစမ်းသပ်ချက်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်လား ။ Screen ကိုမထိခင်အချိန်အထိအီလက်ထရွန်များသည်ထိုနေရာများတွင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရှိနေနိုင်သည်။ Screen ကိုထိသောအခါမှသာလျှင်ရှိသောနေရာကိုပြောပြနိုင်သည် ။ ထိုတိုင်းတာလိုက်သောအချိန်တွင်သာပင်လျှင် အီလက်ထရွန်တည်ရှိသည့်နေရာ (Position) ကို ပြောနိုင်သည်။ တိုင်းတာမှုမတိုင်ခင်အချိန်တွင် အီလက်ထရွန်၏ တည်ရှိမှု နေရာ သည် ဖြစ်တန်စွမ်း ဖြင့်သာပြောလို့ရနိုင်ပေသည်။ တိုင်းတာလိုက်သောအချိန်တွင် မှ အခြားနေရာများတွင်ရှိနိုင်သော ဖြစ်တန်စွမ်းများ ပျောက်ကာ သူ၏ အမှန်အကုန်တည်ရှိနေသော နေရာကိုသိနိုင်ပေသည်။ (ပိုမိုရှင်းလင်းစေရန်အတွက် ပုံ-၈ ကိုကြည့် ။ )
ပုံ-၈ Screen ကိုထိသောအခါမှသာလျှင်အီလက်ထရွန်၏တည် ရှိသောနေရာကိုပြောပြနိုင်သည် ။
အင်းးး အဲ့လိုအဆိုကို Einstein ကတော့ လက်မခံခဲ့ဘူးဗျာ။ သူဟာတိကျသေချာခြင်း (Certainty) ကိုလက်ခံယုံကြည်သူဗျ။ အရာတစ်ခုကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အချိန်တင်မဟုတ်ပဲ ဘယ်အချိန်မှာပဲ ကြည့်ကြည့် သူတည်ရှိနေတဲ့နေရာကို ခန့်မှန်းလို့ရကိုရရမယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်ကြည့်မနေတဲ့အချိန်မှာလည်း လမင်းကြီးဟာ သူ့နေရာနဲ့သူတိတိကျကျရှိနေပုံစံမျိုး ကိုပဲသဘောကြတယ်” လို့ Einstein က ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Einstein ဟာ Quantum Mechanics မှာ တစ်ခုခုတော့ လိုအပ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သူဟာ Quantum မှားတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ မပြည့်စုံသေးဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။ သူဟာ Quantum မှာလည်း ဂြိုဟ်တွေ ကြယ်တွေကိုခန့်မှန်းသလိုမျိုးတိတိကျကျအက်တမ်အောက်အမှုန်တွေကိုခန့်မှန်းလို့ရမဲ့ညီမျှခြင်းတွေရှိရမယ်လို့ ယုံကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ Einstein ရဲ့အဲ့လိုအဆိုကိုလည်း Niels Bohr ကနေပြီး လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ Einstein က “ဘုရားသခင်ဟာကြွေအံမကစားပါဘူး” လို့ဆိုတဲ့အခါမှာ Niels Bohr က တော့ “Einstein ရေ။ ဘုရားသခင် ကိုဟိုဟာမလုပ်နဲ့ ဒီဟာလုပ်လို့သွားသွား ပြောမနေနဲ့ကွာ” လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
(အပိုင်း ၂ ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်။ Curiosity Science Magazine Issue 8 မှာ ပါပြီးသား ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။)
← ပဉ္စမမြောက်အား တစ်ခု ရှိနိုင်သေးသည်ဟု လေ့လာမှုအသစ်များမှ ပြောကြားလိုက်သည်။
နာဆာဟာ ဂျုပီတာဂြိုလ်ရဲ့ အရံလဖြစ်တဲ့ ယူရိုပါ လပေါ်ကို ဘာကြောင့် သွားချင်နေရတာလဲ →
2 responses to “ဘုရားသခင်ကြွေအံကစားခဲ့သလား?(သို့မဟုတ်)ကွမ်တမ်ကမ္ဘာသို့ အလည်တစ်ခေါက်”
ငထှနျး September 5, 2016 at 11:16 am · · Reply →
ပို့ဈတှကေို မွနျမာယူနီကုဒျနဲ့ရေးတငျပွီး ဇျောဂြီဖောငျ့သုံးသူတှပေါ ဖတျလို့ရအောငျ font embed လုပျထားရငျ အရမျးကောငျးမှာပဲ။
Pingback: ဘုရားသခင်ကြွေအံကစားခဲ့သလား?(သို့မဟုတ်)ကွမ်တမ်ကမ္ဘာသို့ အလည်တစ်ခေါက် – အပိုင်း (၂) | Curiosity Science Magazine·